Wararka Maanta: Axad, July 8 , 2012-Siyaasiga Yaasiin Maaxi oo Sweden kaga dhawaaqay musharaxnimadiisa madaxweynenimada Soomaaliya
Munaasabadda uu Yaasiin Maaxi uga dhawaaqay musharaxnimadiisa ayaa waxaa ka qeybgalay dad aad u faro badan oo ka kala yimid dalalka Ingiriiska, Holland iyo gobollo ka tirsan dalka Sweden.
Munaasabadda oo jawi aad u qurux badan ku dhacday ayaa waxaa ka hadlay dad lagu martiqaaday in ay wax ka yiraahdaan musharaxnimada madaxweynenimo ee Yaasiin Maaxi oo dhanka kale ah Guddoomiyaha Xisbiga Midnimada Bulshada Soomaaliyeed (SSUP).
Waxaa kale oo ka hadlay Xasan Muuse Cali Qoslaaye oo ka yimid magaalada Göteborg ayaa ka hadlay, wuxuuna ugu horreyn sheegay in Yaasiin Maaxi uu uga mahadcelinayo geesinnimada uu sameeyay, taasi oo ah in uu go’aansaday in uu isku soo taago xilka madaxweynenimada Soomaaliya. "Haddii dadka oo dhan ay yiraahdaan ma dooneyno in aan xilkaas isu soo sharraxno yaa wax qabanaya" ayuu dadkii dhegeysanayay weydiiyay, wuxuuna intaas ku daray in arrinta uu sameeyay uu uga mahadcelinayo Yaasiin Maaxi.
Xasan Qoslaaye waxaa uu intaas ku daray in Yaasiin Maaxi uu yahay musharrax ka duwan musharixiinta u sharraxan xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya, wuxuuna taasi sabab uga dhigay in uu yahay shakhsi aaney wadan shisheeye, balse uu yahay qof wax ku doonaya rabitaanka shacabka Soomaaliyeed.
Duqii hore ee magaalada Muqdisho Cabdullaahi Muuse Xasan ayaa ka hadlay munaasabadda wuxuuna sheegay in uu ku faraxsan yahay in uu goob-joob u ahaado munaasabadda musharraxnimada Yaasiin Maaxi, wuxuuna soo dhaweyn kaddib uu la dardaarmay musharraxa isagoo kula dardaarmay in uu xuquuqda shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan haweenka, caruurta iyo dadka dulman.